उत्खनन हुन नसक्दा करोडौँको शिलाजित अलपत्र | गृहपृष्ठ
Home समाचार उत्खनन हुन नसक्दा करोडौँको शिलाजित अलपत्र
चैत ५, बेनी । प्राविधिक ज्ञान र उपकरणको अभावका साथै सम्बन्धित पक्षको बेवास्ताका कारण म्याग्दीका भिर पहरामा पाइने बहुमूल्य शिलाजित उत्खनन हुन सकेको छैन । आयुर्वेदिक औषधिका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने शिलाजित उत्खनन गरी उपभोग गर्नेतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यान नपुग्दा वर्षेनी करोडौँ खेर गइरहेको छ ।
म्याग्दीका बाबियाचौर, ज्यामरुककोट, भकिम्ली, कुइनेमंगले, मुदी, मुना, ताकम, मराङ, बिमलगायतका पहरामा शिलाजित पाइन्छ । शिलाजित उत्खनन गर्नेतर्फ सम्बन्धित पक्षले चासो नदेखाउँदा स्थानीयबासी निराश भएको ज्यामरुककोटका शिवराम शर्माले बताए ।
नुनिलो र टर्रो स्वाद हुने शिलाजित भिर पहरामा मात्र पाइन्छ । शिलाजित कालो र सेतो गरी दुई किसिमका हुन्छन् । पहराबाट निस्किएको एक प्रकारको रसायन जमेर शिलाजित बन्ने गर्दछ ।
शिलाजितको नियमित प्रयोग गर्नाले स्वास्थ्यमा निकै फाइदा पुग्ने जिल्ला आयुर्वेदिक चिकित्सक बताउँछन् । उत्खनन गर्ने हो भने म्याग्दीमा वार्षिक रू. १० करोडसम्मको शिलाजित विक्री हुनसक्ने सम्भावना भए तापनि प्राविधिक ज्ञान र उपकरणको अभावमा खेर गइरहेको उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ ।
बजारमा प्रतिदशग्राम शिलाजित रू. २५ देखि रू. ३० सम्ममा विक्री हुन्छ । तर जडीबुटीको असन्तुलित व्यापारका कारण लगानीकर्ता यसतर्फ आकर्षित हुन नसकेको जिल्ला वन कार्यालय म्याग्दीले जानकारी दिएको छ । वन कार्यालयका अनुसार जिल्लाबाट न्यून मात्रामा मात्र शिलाजित निर्यात हुने गरेको छ । रासस